I-Skype ngoku ikuvumela ukuba usebenzise inkonzo ngaphandle kokuba neakhawunti | Iindaba zeGajethi
I-Skype ngoku ikuvumela ukuba usebenzise inkonzo ngaphandle kokuba neakhawunti
Ukusukela oko kwafika iSkype ezandleni zikaMicrosoft, kuye kwakho imisebenzi emininzi emininzi eyongezwe kwiqonga, uninzi lwazo alunakuze luwele ezingqondweni zethu, njengokukwazi ukusebenzisa i-Skype ngokulula kwisikhangeli, ngaphandle kokufaka usetyenziso nangaliphi na ixesha. Kubo bonke abo basebenzisa iSkype manqaphanqapha kwaye abangenanjongo zokuvula iakhawunti kulawo matyala, abafana baseRedmond bayihlaziyile inkonzo kwakhona ukuvumela abasebenzisi ngaphandle kweakhawunti ebhalisiweyo ukuba bayisebenzise.
Ukuze sikwazi ukusebenzisa le nkonzo, kufuneka singenise igama lomsebenzisi, ekungafuneki ukuba libhaliswe eqongeni. Awudingi ukufaka imeyile engqinelana neakhawunti ehambelana neMicrosoft. Xa ufaka igama labasebenzisi, siya kubonakala njengeNdwendwe phantsi kwegama lethu. Lo msebenzi ulungele bonke abo basebenzisi, njengoko benditshilo ngasentla, sebenzisa i-Skype manqaphanqapha.
Olu khetho lutsha lusivumela ukuba senze amagumbi okuxoxa apho abantu abangama-300 banokuthatha inxaxheba kwaye ikuvumela ukuba usebenzise uMguquli weSkype, Kwimeko apho omnye okanye abanye babaxhasi bangathethi ulwimi olunye. Ukongeza, i-Skype iya kusivumela ukuba sigcine iincoko eziphantsi komsebenzisi wethu iiyure ezingama-24, kwimeko apho kufuneka sidibane nabo kwakhona xa incoko iphelile. Eli nqaku lisebenza kuphela kwizikhangeli zewebhu kwaye sele lifumaneka eMelika, kodwa ngokweMicrosoft kungekudala izakufumaneka kwihlabathi liphela.
Ngoku uninzi lwamaqonga emiyalezo adibanisa ukubiza ividiyo, I-Skype ayifuni ukushiywa ngaphandle kule marike, kunye nokuzisa ingqalelo yabasebenzisi, iyaqhubeka ukongeza imisebenzi emitsha, enjengale kunye naleyo esivumela ukuba sisebenzise inkonzo ngaphandle kokufaka nasiphi na isicelo kwikhompyuter yethu, kuba ifumaneka kuphela kwiikhompyuter, hayi izixhobo .
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Skype ngoku ikuvumela ukuba usebenzise inkonzo ngaphandle kokuba neakhawunti
IWolder yandisa uluhlu lweWIAM ngeemodeli ezine, apho iWIAM # 65 Lite ime ngaphandle